လမ်းပြကြယ်: Informationအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်တဲ့Japan(သို့)ကံဆိုးပေမယ့်မှခံသာ သေးတဲ့ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ
ငလျင်အခြေအနေမှာ Information အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနိုင်တဲ့ Japan လို့ ဒီ post ကို အမည်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရုံးမှုတွေနဲ့ လူအသေအပျောက်များ တစ်သောင်းနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ Information အတွက် ပိတ်မထားပါဖူး လုံးဝဖွင်ပေးထားပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ဝါယာလက်စ်နဲ့ Free သုံးခွင့်နှင့် နိုင်ငံတကာသို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Free ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ရောက် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ မိတ်ဆွေများအတွက် ဂျပန်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်တာကို ဝါယာလက်စ်ကနေ Free အသုံးပြုနိုင်သော ID & Password များ
Login ID (Log In ID): 01 @ free @ lw
Password (Password): livedoor
Login ID (Log In ID): 02 @ free @ lw
Login ID (Log In ID): 03 @ free @ lw
ဖုန်းများမှ နိုင်ငံတကာကို Free ခေါ်မယ်ဆိုလျှင် 0010101 ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
google မှ ဂျပန် ငလျင်နှင့်ပက်သက်သော အရေးပေါ် အင်တာနက်စာမျက်နှာလင့်ပါ http://www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html
docomo ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများ အားရှာဖွေရန်လင့်ပါ http://dengon.docomo.ne.jp/Einoticelist.cgi?es=0
softbank ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများ အားရှာဖွေရန်လင့်ပါ http://dengon.softbank.ne.jp/pc-e1.jsp
Nuclear and Industrial safety agency မှ သတင်းများ ရယူရန် http://www.nisa.meti.go.jp/english/index.html
Japan Meteorological Agency မှသတင်းများရယူရန် http://www.jma.go.jp/en/tsunami/
emobile disaster Message Board လင့်ပါ http://dengon.emnet.ne.jp/en/service.do
Disaster Message Board Top လင့်ပါ http://dengon.willcom-inc.com/dengon/Top.do?language=E
Pacific Tsunami Warning Center လင့်ပါ http://www.weather.gov/ptwc/?region=1&id=pacific.2011.03.11.073000
ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ Cabinet အဖွဲ့လင့်ပါ http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html
ဂျပန်အစိုးရက အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတင်းများ တောက်လျောက်ထုတ်လွင့်ပေးနေတာတော အတုယူဖို့ကောင်းပါတယ် ။ လက်ရှိအနေနဲ့မြန်မာပြည်အား အားကျပြီး ဂျပန်မှာလဲအလှည့်ကျမီးပေးတော့မယ်ဆိုတာလဲ အတုယူဖို့ကောင်းပါတယ် Tokyo electric power company မှ Group ၅ခု ခွဲထားပြီး ၃နာရီခြားမျှ အလှည့်ကျမီးဖြတ်မည်ဟုတရားဝင်ြေ
Hour rotating power outages and major areas of planned March 14 (presented TEPCO)
The first group of about three hours of 6:20 to 10:00
9:20 to 13:00 hours the second group of three
The third group of3hours 12:20 to 16:00
The fourth group of3hours 13:50 to 17:30
The fifth group of3hours 15:20 to 7:00 p.m.
The first group of3hours 16:50 to 20:30
The second group of3hours 18:20 to 22:00
* May be around the start and end times.
* Other hours may be scheduled power outage.
Group များ ကို ဤ နေရာတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါရန် http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpress3.pdf&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgGC2hbyhrjXeQBvXW8mSqx_lgWxg အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတောက်လျောက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်များအသုံးပြုပြီး အစားအစာနှင့်ရေများချပေးနေပြီ
ဂျပန် အစိုးရနဲ့ လျပ်စစ်ကုမ္ပဏီမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျော့သုံးရန် မေတ္တာရပ်ခံထားပါပြီ
သတင်းနှင့် ရေဒီယို ကို အမြဲတမ်း နားစွင့်ထားဖို့လဲ တပ်လှန့်ထားပါတယ်
အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ပေးနေပါတယ်
Fukushima Daiichi နှုကလီယား စက်ရုံ အနီး ကီလိုမီတာ ၂၀ ခန့်အတွင်းနေ ပြည်သူများ နေရာရွေ့ပြောင်းပေးဖို့နှိုးဆော်
Tokyo Electric Power စက်ရုံအနီး ကီလိုမီတာ ၁၀ အတွင်းနေ ပြည်သူများ ဘေးကင်းရာရွေ့ပြောင်းဖို့လနှိုးဆော်ထားပါပြီ။
url - http://www.humanright-myanmar.com/2011/03/information-japan.html
လာရောက်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ တတ်နိုင်တာလေးကတော့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား
တွေအားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ဒုက္ခခပ်သိမ်း စိုးရိမ်သောကခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပြီး
ဖြစ်လာသမျှ သဘာဝ ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးတို့နှင့် မလွဲမရှောင်သာ တွေ့ကြုံကြရ
သော်လည်း အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ် ဆုံးရုံးရခြင်းဘေးတွေက သက်သာရာ
ရကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ အင်း...အားလုံး ဘေးရန်ကင်းဝေး